၁၂လ ရာသီ ခွင်မှ ၁၃လ ရာသီခွင် သို့ ပြောင်းလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ၁၂လ ရာသီ ခွင်မှ ၁၃လ ရာသီခွင် သို့ ပြောင်းလဲ
၁၂လ ရာသီ ခွင်မှ ၁၃လ ရာသီခွင် သို့ ပြောင်းလဲ
Posted by ဆူး on Jan 31, 2011 in Society & Lifestyle | 27 comments
ဆူး စ်ိတ်ကူး မေးထဲမှ ရသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်က ဗေဒင်ဆရာ Parke Kunkle (ပါကီ ကန်ကလဲ) က ကမ္ဘာမြေနှင့် နေလ ၊ နက္ခတ်တာရာတို့ ဆက်သွယ်ပုံ အပြောင်းအလဲများ ရှိလာသဖြင့် ယခင်က သုံးစွဲခဲ့သည့် ဗေဒင်ကိန်းခန်း မွေးလ ဂြိုလ်အိမ် ၁၂ မျိုး ရှိခဲ့ရာမှ ၁၃ ခုအထိ ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း တွက်ချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယခုတိုးလာသည့် ဂြိုလ်အိမ်မှာ Ophiuchus: Nov. 29 – Dec. 17 (မြွေအလမ္ဗာယ်ဆရာ ဒဏ္ဍာရီဇာတ်ဆောင်) ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၉ မှ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ အတွင်း မွေးဖွားသူများ ဖြစ်သည်။ ယခုအသစ် မွေးလဂြိုလ်အိမ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၎င်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် နေ့စဉ် အင်တာနက်ဗေဒင်ကြည့်သူ၊ ဗေဒင်ကိန်းဂဏန်းများနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်သူများကြားတွင် အတော်ကို ဂယက်ရိုက်သွားကြောင်း၊ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပွားကြကြောင်း အင်တာနက်ပေါ်က လူမှုကွန်ယက်များဖြစ်သော ဖေ့ဘွတ်၊ တွစ်တာများ အဆုိုအရ သိရသည်။
ယခုသတင်းများတွင် ပြန်လည်ဖော်ပြချက်များအရ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်၏ တွက်ချက်မှုမှာ အရှေ့တိုင်း ဗေဒင်နည်းကို သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း အနောက်တိုင်း ဗေဒင်နည်းနှင့် မဆိုင်ကြောင်း စောဒကတက်ကြသည်ဟုလည်း သိရသည်။ အနောက်တိုင်းဗေဒင်က ကမ္ဘာနှင့် နေကို အခြေခံပြီး အနှစ် ၅ ထောင် သက်တမ်းရှိ အရှေ့တိုင်း ဝေဒဗေဒင်က ကမ္ဘာနှင့် နက္ခတ်တာရာတို့ ဆက်စပ်မှုကို အခြေခံသည်ဟု ဆိုကြရာ Parke Kunkle (ပါကီ ကန်ကလဲ) က ဝေဒပညာဖြင့် တွက်ချက်ပြီး ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မည်သုို့ပင်ဖြစ်စေ ကိုယ့်မွေးလဂြိုလ်အိမ်ကို မှီတည်ပြီး တွက်ချက်၍ လတ်တလော ခရီးသွား၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ အင်တာဗျူးဖြေ၊ အလုပ်လျှောက်မည့်သူများမှာ အနည်းနဲ့ အများတော့ အကြပ်ရိုက်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးကြသည်။
ရာသီခွင် ပြောင်းသွားတယ် …
ဆူး ကတော့ အသစ် ပြောင်းတဲ့ ရာသီ ခွင်ထဲ ရောက်သွားတယ်။
မမဆူးရေ သေချာသွားပီ ဗျုို့..မမဆူးရဲ့..
အသစ် လား.. ကောင်းသားဘဲ.. အခု သုံးတဲ့ ကွန်ပြူတာ စုပ်နေလို့ အသစ် လိုချင်နေတာ.. ဗေဒင်မှန်ရင်မှန် မမှန်လို့ကတော့ အသစ်သာ ၀ယ်ပေးပေတော့
ဒါဆို မောင်လေးဟာ ပေးမယ်..အသစ်မဝယ်နိုင်သေးလို့ပါ..
တွေ့နေကျနေရာကို ဘဲ လာခဲ့နော်…
အသစ် ဆိုပြီး သူများ သုံးပြီးသား ဘာလို့ ဖြစ်နေရတာလဲ.. ဒါဆို ဗေဒင် မမှန်တော့ဘူး။
ဝယ်ထားပီး မသုံးရသေးတော့ အသစ်စက်စက် ရေမရောပါနော်…
သစ်သမှ သစ်သစ်သစ်သစ် မြည်နေတယ်….
ဒါဆိုလည်း လမ်းထိပ်က ဗယာကျော်သည် မမကို လွတ်လိုက်မယ်။ အသားတော့ နည်းနည်း မည်းတယ်နော် ရှာရလွယ်အောင် လမ်းညွန်တာ..
လူကလေးရယ် သနားတယ် …
ဆူး ဆိုတာ စူးတတ်တယ်လေ….
မင်း ဆူးစူးပြီ မဟုတ်လား…
မင်း အသဲကွဲ မှာ….
ဟော့တော် .. တို့မွေးလက နေရင်းထိုင်ရင်း အသစ်ထဲရောက်သွားပြန်ပြီ ။ ဇာတာတက်တာလား ကျတာလားတော့မသိဘူး
အင်း ဒီလိုဆိုရင် နွယ်ပင် ရာသီခွင်လဲ အသစ်ပြောင်းသွားပြီ …
အင်း ဒီလိုဆိုရင် နွယ်ပင် ရာသီခွင်လဲ အသစ်ပြောင်းသွားပြီပေါ့ …
ကျနော်လဲပြောင်းတွားပီ Sagittarius (ဓနု) ကိုပဲကြိုက်တယ် အဲ့ဒါနဲ့လဲအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တယ်လေ ခုအသစ်ကဘာလဲ ဟင်!!
အစက ဟုတ်သလိုလိုရှိနေတာ အခုတော့ ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲ
အင်း…စံဇာနီလို2အုပ်ဝယ်ရတော့မယ် ထင်တယ်….
ခု ရာသီခွင်အသစ်ရဲ့ symbol က ဘာလေးလဲ ဟင်
ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ရာသီသစ်ထဲပြောင်းသွားတယ် ထင်တာ။ ခုမှဘဲ ဘ၀တူတွေများမှန်း သိတော့တယ်။ ခုလောလောဆယ် ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။ ဘာဗေဒင်မှလည်း တွက်မထားတော့ ဘာမှလည်း မမှားတော့ဘူးပေ့ါ။ ဗေဒင်ရာသီခွင် ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ ဗေဒင်မမေးတော့ဘူး။ အကြားအမြင်ဘဲ မေးတော့မယ။် ဒါဆိုရပြီလား ဆြာဆူး။
အကြား အမြင် မေးချင်ရင် ဆူး ကို မေးပါ မမ
ဆူး ကြားတာ မြင်တာ အကုန် ပြောပြပါ့မယ်။
ဥပမာ.. မမ ၏ အသံသည် ချစ်စရာ ကောင်း၏ အသံသာ၏ ကဲ့သို့ပေါ့
ဒီလို နောက်ဆုံးရက်ကျနေတဲ့သူတွေကျတော့ ဘယ်ထဲပါသွားလဲဟင်…………
ဆူး နဲ့ မွေးနေ့ ချင်း နီးစပ် သူတွေ တော်တော် များသလိုဘဲနော်။ ဆူး လည်း နိဝင်ဘာ ရဲ့ နောက်ဆုံးရက်မှာ မွေးတာ…
ဆူးရေ ဆူးပြောတာအကုန်မှန်တယ်။ သို့သော် တစ်ခုဘဲ ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်။ ဝေးလေကောင်းလေဆိုတာပေါ့။
မမ က ဘာလို့ ဝေးလေကောင်းလေ ဖြစ်တာလဲ ဟင်.. မသိလို့နော်.. စဉ်းစားလို့ကို မရဘူး။ ;)
ကင်းမြီးကောက်ကနေ ချိန်ခွင်ဖြစ်သွားပြီ ချူးမရေ ညည်းကြောင့်
အဘနီ ကင်းမြီးကောက် လို ဇောက်ထိုး မထောင်ရတော့ဘူးပေါ့။
ချိန်ခွင်လို သမာ သမတ်ကျကျ လာဝယ်တဲ့ လူတွေကို ပိုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့။
ညည်းလာဝယ်ရင်တော့ထည့်ပေးမှာပေါ့ ။ ကျန်တဲ့သူတွေတော့ နိုးပဲ ။ အတိအကျပဲ
ဒါဆို ခြင်္သေ့ကရောဘာဖြစ်သွားမှာလည်းဟင်…… ပြောကြပါအုံး….
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က နောက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ပြောဖူးတယ်။ နင် သီချင်းဆိုတာ အရမ်းကောင်းတာဘဲတဲ့။ အဝေးကနားထောင်ရတာ ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်တဲ့။ နောက်ဆုံးမကြားရတော့ အကောင်းဆုံးဘဲတဲ့လေ။ ဒါဆို ဆူး ရှင်းလောက်ပြီပေါ့နော်။